Akụkọ Bible: Gidiọn Na Narị Ndị Ikom Atọ Ya - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ NA-AHỤ ihe na-eme n’ebe a? Ndị a bụ ndị ikom na-eburu Izrel agha. Ọ bụ mmiri ka ndị ikom ahụ hulatara ala na-aṅụ. Ọ bụ Onyeikpe bụ́ Gidiọn guzo ha n’akụkụ. Ọ na-ele otú ha si aṅụ mmiri.
Lee anya nke ọma ụzọ dị iche iche ndị ikom ahụ si na-aṅụ mmiri. Ụfọdụ kpudoro ihu ha ná mmiri ahụ. Ma otu onye ji aka ya na-akwọrọ mmiri, ka o wee nwee ike ịhụ ihe na-eme gburugburu ya. Nke a dị mkpa, n’ihi na Jehova gwara Gidiọn ka ọ họrọ naanị ndị na-elepụ anya mgbe ha na-aṅụ mmiri. Chineke gwara ya ka o zilaga ndị fọdụrụ n’ime ha. Ka anyị lee ihe mere o ji kwuo otú ahụ.
Izrel abanyekwala ná nnukwu nsogbu ọzọ. Ihe kpatara nke ahụ bụ na ha erubereghị Jehova isi. Ndị Midian akawo ụmụ Izrel ike, wee malite imegbu ha. N’ihi nke a, ụmụ Izrel kpọkuru Jehova maka enyemaka, Jehova wee gee ha ntị.
Jehova gwara Gidiọn ka ọ chọta ndị agha, Gidiọn wee kpọkọta puku ndị agha iri atọ na puku abụọ. Ma ndị agha na-emegide Izrel dị otu narị puku na puku iri atọ na puku ise. N’agbanyeghịkwa nke ahụ, Jehova gwara Gidiọn, sị: ‘Ndị agha gị karịrị akarị.’ Gịnị mere Jehova ji kwuo otú a?
Ọ bụ n’ihi na ọ bụrụ na Izrel emerie n’agha ahụ, ha pụrụ iche na ha meriri n’ike ha. Ha pụrụ iche na enyemaka Jehova adịghị ha mkpa iji merie n’agha. N’ihi nke a, Jehova sịrị Gidiọn: ‘Gwa ndị ikom niile na-atụ egwu ka ha laa.’ Mgbe Gidiọn gwara ha otú ahụ, ndị agha ya dị puku iri abụọ na puku abụọ lara. Nke ahụ mere ka ndị agha ya fọdụ naanị puku ndị ikom iri bụ́ ndị ga-ebuso ndị agha dị otu narị puku na puku iri atọ na puku ise agha.
Ma gee ntị! Jehova sịrị: ‘Ndị agha gị ka karịrị akarị.’ Ọ gwara Gidiọn ka o mee ka ha ṅụọ mmiri site ná mmiri iyi nke a, ka o zilagakwa ndị niile na-ekpudo ihu n’ala na-aṅụ mmiri. ‘M ga-enye gị mmeri site n’aka narị ndị ikom atọ bụ́ ndị na-elepụ anya mgbe ha na-aṅụ mmiri,’ ka Jehova kwere ná nkwa.
Oge agha ahụ wee ruo. Gidiọn wee kee narị ndị ikom atọ ya ụzọ atọ. O weere opi ike na ite nke ọwa dị n’ime ya nye onye ọ bụla n’ime ha. Mgbe o ruru n’etiti abalị, ha niile wee gbaa ebe ndị iro ha wuru ụlọ ntu ha gburugburu. N’otu mgbe ahụ, ha niile fụrụ opi ha, tiwaa ite ha, wee tie mkpu, sị: ‘Mma agha Jehova na nke Gidiọn!’ Mgbe ndị agha bụ́ ndị iro ha tetara n’ụra, ha nwere mgbagwoju anya ma gbasasịa n’egwu. Ha niile malitere ịgba ọsọ, ụmụ Izrel wee merie n’agha ahụ.
Ndị Ikpe isi 6 ruo 8.
Olee otú ụmụ Izrel si banye ná nnukwu nsogbu, ọ̀ bụkwa n’ihi gịnị?
N’ihi gịnị ka Jehova ji gwa Gidiọn na ndị agha ya karịrị akarị?
Mmadụ ole fọrọ mgbe Gidiọn gwara ndị nke egwu ji ka ha laa?
Dị ka e gosiri na foto a, kọwaa otú Jehova si gbubilata ọnụ ọgụgụ ndị agha Gidiọn ruo na naanị narị mmadụ atọ.
Olee otú Gidiọn si hazie narị ndị ikom atọ ya, oleekwa otú Izrel si merie n’agha ahụ?
Gụọ Ndị Ikpe 6:36-40.
Olee otú Gidiọn si mara ihe bụ́ uche Jehova n’ezie?
Olee otú anyị si achọpụta ihe bụ́ uche Jehova taa? (Ilu 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)
Gụọ Ndị Ikpe 7:1-25.
Gịnị ka anyị pụrụ ịmụta n’aka narị ndị ikom atọ ahụ dị nkọ ma e jiri ha tụnyere ndị ahụ na-adịghị nkọ? (Ikpe 7:3, 6; Rom 13:11, 12; Efe. 5:15-17)
Dị nnọọ ka narị ndị ikom atọ ahụ mụtara ihe site n’ile Gidiọn anya, olee otú anyị si amụta ihe site n’ile Gidiọn ahụ ka Ukwuu, bụ́ Jizọs Kraịst, anya? (Ikpe 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pita 2:21)
Olee otú Ndị Ikpe 7:21 si enyere anyị aka inwe afọ ojuju ije ozi n’ebe e kenyere anyị ije ozi ná nzukọ Jehova? (1 Kọr. 4:2; 12:14-18; Jems 4:10)
Gụọ Ndị Ikpe 8:1-3.
Mgbe a bịara n’idozi esemokwu n’etiti anyị na nwanna anyị, gịnị ka anyị pụrụ ịmụta site n’ụzọ Gidiọn si dozie esemokwu dị n’etiti ya na ndị Ifrem? (Ilu 15:1; Mat. 5:23, 24; Luk 9:48)